Aluminium mejupụtara Factory, Suppliers - China Aluminium mejupụtara Manufacturers
Polyester ntekwasa Aluminium mejupụtara Panel
Aluminom mejupụtara ogwe (ACP), nke aluminom mejupụtara ihe (ACM), na-ewepụghị ogwe mejupụtara abụọ mkpa eriri igwe-ntekwasa aluminum Ibé akwụkwọ bonded na a na-abụghị aluminom isi. A na-ejikarị ACP eme ihe maka mkpuchi ma ọ bụ ihu ihu nke ụlọ, mkpuchi, na akara. A na-ejikarị ACP eme ihe maka mpụga na nke ime ụlọ ma ọ bụ nkewa, uko ụgha, akara ngosi, ihe mkpuchi igwe, ihe owuwu, wdg.
Aluminom mejuputara panel mejupụtara 3 n'ígwé, elu na azụ mkpuchite nke elu ike aluminum alloy Ibé akwụkwọ na isi nke nontoxic ala njupụta polyethylene (Pee) mpempe akwụkwọ. Njirimara -Light arọ, elu ike, oké rigidity, elu mmetụta na-eguzogide, -excellent elu flatness na ire ụtọ, -heat mkpuchi, ụda mkpuchi, ọkụ na-eguzogide, -acid-eguzogide, alkali-eguzogide, ezi weatherproofing na-abụghị resonance -various edo na agba, nwere ike mfe esichara na fabr ...
3mm Alubond Aluminium mejupụtara obubọk
AKWINKWỌ AKW PKWỌ AKWINKWỌ Aluminium Aluminium mejupụtara mpempe akwụkwọ aluminom abụọ ma ọ bụ "akpụkpọ" nke nwere isi nke polyethylene, jikọtara ma ọ bụ "sandwiched" n'etiti etiti abụọ nke aluminom. Nke a na-enye panyọ dị fechaa ma na-agbanwe agbanwe nke nwere ike iguzogide ihe ndị dị n'èzí. A na-ese elu aluminom ma ọ bụ anodized. A na-ekpuchi elu akwụkwọ a na-acha akwụkwọ nke aluminom na akwa polyester dị elu ma na-echebe ya na ikpuchi anya iji kpuchie ya ...
Nrụgide oru Ringlock Scaffolding, Ringlock Scaffolding mgbodo, Akụkụ Ulo olu nke Ringlock, Metal Cuplock Scaffolding, Kwikstage Scaffolding Ngwa, Scaffolding Kemeghi ịghasa Jack,